Arsenal Oo Guul Ka Gaartay Kooxda Newcastle United, P. Aubameyang Oo Shabaqa Soo Taabtay
HomeWararka Ciyaaraha MaantaArsenal oo guul ka gaartay Kooxda Newcastle United, P. Aubameyang oo Shabaqa soo taabtay
May 3, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
Kooxda Arsenal oo Booqasho ugu tagtay Kooxda Newcastle United ayaa guul muhiim ah kasoo gaartay Safarkeeda ciyaar ku dhamaatay 2-0 waxana Gunners ay dib ugu soo laabatay wadada guulaha.
Xidiga P. Aubameyang oo dib ugu soo laabtay xanuunka Duumada ayaa kulankan wacdaro dhigay xili Macalinka Kooxda uu isbadal ku sameeyay Shaxdiida Caadiga.
Qeybta hore ee Ciyaarta ayay u suura gashay Arsenal in ay qabato Hogaanka Ciyaarta iyadoo goolkaasi ka heshay Mohamed Elneny ciyaarta oo socoto 5 daqiiqo waana gookiisa ugu horeeyay.
Kooxda Arsenal oo Kulankan xoogeeda iskugu geysay ayaa heshay Goolkeeda labaad qeybta danbe xidiga P. Aubameyang oo maqnaa kulamadiisa ugu danbeeyay ayaa Shabaqa soo taabtay Daqiiqadii 66aad ee Ciyaarta isagoo si Qurux badan u dhameestiray kubad banaanka loo soo dhigay guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 0-2.
Natiijada kulankan ayaa Arsenal ka caawineysa in ay soo gasho booska 9aad ee Horyaalka xili ay isku diyaarinayso kulankeeda xiga ee Villarreal.
Dhanka kale waxaa la hakiyay Kulankii Manchester United iyo Liverpool ladib markii ay garoonka soo galeen taageerayaal careysan